1.Fampiorenana haingana sy mora kokoa: ny fanantonana na ny fametahana endrika maivana sy manify dia mahatonga ny fametrahana haingana sy mora kokoa.
2.Zoro mijery malalaka: Samy 160 ° avy amin'ny marindrano sy mitsangana ho an'ny zoro fijerena.
Raha jerena amin'ny làlan-kaleha dimy dia io no sary voajanahary sy mazava amin'ny fisehoana LED
3.Ultra Fast Valiny: ny hafainganam-pandehan'ny valiny dia mihoatra ny fetran'ny mason'ny maso mitanjaka, raha milalao ny sary haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny efijery LED, hanana tombony bebe kokoa izany, tsy hisy ny fihenan-tsofina sy ny fiolahana ary hanome tanteraka ireo sary mavitrika izany.
4.Ny kalitao tsara azo antoka: ny vokatray dia nandalo fanamarinana maro anisan'izany ny CE, FCC, RoSH ary ny fanamarinana SGS ary maro hafa. Aout atrikasa 300 + metatra toradroa, fahanterana ny vokatra 72 + ora, miantoka vokatra avo lenta.
1.Fandaharana serivisy namboarina
2. Fanitsiana sy fanaraha-maso ny tranonkala (Serivisy lavitra)
3.Manolo sy manamboatra singa malemy
Ny vidin'ny fividianana dia tsy misy fanohanana, serivisy na fikojakojana eo an-toerana fa fanampiny
fandrakofana azo ifampiraharahana.
2. Sudra fijerena malalaka: Samy 160° avy amin'ny marindrano sy mitsangana ho an'ny zoro fijerena.
4. Azo antoka ny kalitao tsara: ny vokatray dia nandalo fanamarinana maro anisan'izany ny CE, FCC, RoSH ary ny fanamarinana SGS ary maro hafa. Aout atrikasa 300 + metatra toradroa, fahanterana ny vokatra 72 + ora, miantoka vokatra avo lenta.
P5.95 Rental LED LED Screen Stadium LED Vid ...
P4.8 Atitany Video azo alain-tahaka LED ho an'ny velona ...
P8 ivelany malefaka LED rindrina Video Ho an'ny Music Fe ...